ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ရအောင် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ ... (အင်တာဗျူး)
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ရအောင် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ ... (အင်တာဗျူး)
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မထိဘဲ အတိုင်းတိုင်းထားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ရအောင် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ၊ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ” စာအုပ်ကို ရေးသားပြီး မကြာခင်ရက်ပိုင်းကမှ ထုတ်ဝေထားတဲ့ စာရေးဆရာ မောင်ကိုနီ ခေါ် ရှေ့နေ ဦးကိုနီကို ကိုမိုးမြင့်က မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။
Pls. quickly do for new constitution
or amended constitution 2008.
We would like to get DASSK asaPresident.